सस्तो SBB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मार्ग मूल्यहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
द स्विस फेडरल रेलवे, SBB, स्विट्जरल्याण्डमा संचालित राष्ट्रिय रेल कम्पनी हो.
SBB ट्रेनहरू यूरोपमा राष्ट्रिय रेल प्रणालीहरूको माथि स्थानमा छन्, र भित्र 2017 तिनीहरूको सेवाको गुणवत्ताको लागि पहिलो स्थानमा थियो, सुरक्षा रैंकिंग, र प्रदर्शन सूचकांक.
SBB ट्रेन सेवा संसारमा सब भन्दा समयनिष्ठ ट्रेन सेवाहरु मध्ये एक हो, भन्दा कम संग3औसतमा मिनेट ढिलाइ.
SBB ट्रेनहरू उच्च माग मा छन्, र मात्र संग2प्रतिस्पर्धाको रूपमा अन्य रेल कम्पनीहरू, तिनीहरू हाल स्विजरल्याण्ड मा ट्रेन को लागी शीर्ष विकल्प रहन. तिनीहरूले ट्रेन टिकट प्रतिबन्धहरू सेट गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूसँग छ कि टिकट विनिमय वा फिर्तीलाई निषेध गर्दछ जबसम्म यो व्यवसायको प्रकारको टिकट छैन।. जहाँसम्म अझै वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो टिकट मानिसहरूलाई दोस्रो हात बेच्न सक्नुहुन्छ, SBB दोस्रो हात टिकट बिक्री को लागी अनुमति दिदैन. यसले कसरी तपाईंको पैसा बचत गर्दछ? तपाईको टिकट मात्र अर्डर गर्नुहोस् जब तपाई आफ्नो तालिकाको निश्चित हुनुहुन्छ तपाईले दुई पटक एक टिकट बुकिंग गर्नबाट बचाउँनुहुनेछ किनकि केहि आयो र तपाईले मूल टिकट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।.
एकल रेल यात्राको लागि एसबीबी टिकटहरू € १२.50० देखि माथि € १२ as सम्म सुरू हुन्छ. द एक SBB ट्रेन टिकटको मूल्य कस्तो प्रकारको टिकटमा निर्भर गर्दछ, गन्तव्य, र जब तपाइँ यात्रा गर्न छनौट गर्नुहुन्छ:
3) सतह मा, SBB ट्रेन टिकटको मूल्य बजेट एयर टिकट भन्दा बढी महँगो देखिन्छ. यद्यपि, जब तपाईं समावेश सबै शुल्क तुलना गर्नुहुन्छ, SBB ट्रेन टिकट एक राम्रो मूल्य सम्झौता छ. सामान शुल्क जस्तै अन्य लागतहरूको साथ जुन तपाईंले रेलहरूमा भुक्तान गर्नु पर्दैन, SBB द्वारा यात्रा गर्दै सबै भन्दा राम्रो छ.
द SBB मानक टिकट सबै SBB टिकटहरू मध्ये सबैभन्दा लचिलो छ. यो ट्रेन टिकट पोइन्ट-पोइन्टको लागि हो 1 मार्ग वा राउन्डट्रिप्स. अर्को शब्दमा, SBB मानक टिकट क्लासिक ट्राभेलकार्ड हो. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो ट्रेन टिकट तपाईंले खरीदको समयमा छनौट गर्नुभएको सम्पूर्ण दिनको लागि मान्य छ, र सम्म5अर्को दिन. साथै, तपाईं पहिलो र दोस्रो कक्षाको लागि एक SBB पोइन्ट-टू-पोइन्ट टिकट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस पोइन्ट-टु-पोइन्ट टिकटको अर्को ठूलो फाइदा भनेको बच्चा नहुँदासम्म6नि: शुल्क यात्रा. अर्को शब्दमा, तपाईं जहाँसुकै भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको इच्छा र कुनै कक्षामा, A बाट B सम्मको तपाईंको यात्रामा.
तपाइँको SBB प्राप्त गर्न र ठीक समयमा हुनुहोस्, रेलवेले सिफारिश गर्दछ कि तपाईं कम्तिमा आइपुग्नुहोस् 1 एक घण्टा पहिले तपाईंको SBB ट्रेन प्रस्थान अघि. हामी SBB को ट्रेनहरूमा धेरै यात्रा गरेदेखि हामी ट्रेन बचाउनमा छौं, पुग्न पनि सिफारिस गर्नुहोस् 30 मिनेट अग्रिम, त्यसोभए रेल पक्रन तपाईलाई विशाल रेल स्टेशनहरूको माध्यमबाट हतार गर्नु पर्दैन. साथै, एक घण्टा को लागी पसलहरु र खाना स्टैंड को मजा लिन को लागी पर्याप्त समय छ र ती आइटमहरु को लागी तपाइँलाई आवाश्यक हुन्छ ट्रेन यात्रा सकेसम्म सजिलो हुन.
बेसल SBB स्टेशन यूरोप मा सबैभन्दा ठूलो सीमा स्टेशन हो. त्यो भनेको स्विजरल्याण्डबाट हो, तपाईं जर्मनी यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रान्स, अस्ट्रिया, र नेदरल्याण्ड्स SBB ट्रेन सेवा संग. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, त्यहाँ छन् 50 पसल र बसेल स्टेशनमा रेष्टुरेन्टहरू, जहाँ तपाईं यात्रा को लागी आवश्यक सबै चीज को लागी खरीद गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरण को रुपमा, तपाईं खाजा र अन्तिम मिनेट स्मारिका खरीद गर्न सक्नुहुनेछ. बासेल SBB स्टेशन बाट, र तपाई यात्रा गर्न सक्नुहुने प्रमुख स्टेशनहरू फ्रान्कफर्ट हुन्, पेरिस, र साल्जबर्ग.
तपाईं सक्छ रेल मा आरक्षणaमलाई थाहा छमा अग्रिम को लागि5यात्रुहरू प्रति सीट € of को मूल्यमा. यद्यपि, आरक्षण एक व्यक्तिको नामको अन्तर्गत हुनुपर्दछ जुन यात्रा गर्दैछ.
यदि तपाईंले यो पोइन्ट पढ्नु भएको छ भने, तपाइँलाई थाहा छ तपाइँ तपाइँको एसबीबी रेलको बारेमा जान्न आवश्यक छ र तपाइँको एसबीबी रेल टिकट खरीद गर्न तयार हुनुहुन्छ एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्.